Akụkọ - Igwe oxygen oxygen PSA na-arụ ọrụ dị mkpa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Igwe PSA oxygenna-eji zeolite molekụl sieve dị ka adsorbent, ma jiri ụkpụrụ nke nrụgide adsorption na decompression desorption na adsorb ma hapụ oxygen site na ikuku, si otú ahụ kewaa oxygen site na akụrụngwa akpaka. Nkewapụ nke O2 na N2 site na sieve molekụl nke zeolite dabere na obere ọdịiche dị na dayameta na-agbanwe agbanwe nke gas abụọ ahụ. Mkpụrụ ndụ N2 nwere mgbasa ngwa ngwa ngwa ngwa na micropores nke zeolite molekụl sieve, na mkpụrụ ndụ O2 nwere nwayọ mgbasa ngwa ngwa. Na osooso na-aga n’ihu nke usoro mmepụta ihe, ahịa na-achọIgwe PSA oxygen na-aga n'ihu na-abawanye, na akụrụngwa na-arụ ọrụ dị mkpa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Hangzhou OuRui Air Nkewa Equipment Co., Ltd. bụ ọkachamara emeputa nke cryogenic ikuku nkewa, VPSA oxygen mmepụta ngwaọrụ, abịakọrọ ikuku ọcha ngwaọrụ, PSA nitrogen mmepụta, oxygen mmepụta ngwaọrụ, nitrogen ọcha ngwaọrụ, akpụkpọ ahụ nkewa nitrogen mmepụta na oxygen mmepụta ngwaọrụ, electric. Ogwe njikwa Pneumatic. Ogwe njikwa okpomọkụ. Ebipụ ụlọ ọrụ mmepụta valvụ.
1. Banyere ngwa nke ikuku oxygen na ikuku nke ikuku oxygen
Ihe ikuku oxygen dị n’ikuku bụ ≤21%. Mmanụ ụgbọala na-ere ọkụ na ụlọ ọrụ ọkụ na ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'okpuru ọdịnaya ikuku a. Omume egosila na mgbe ọnụọgụ gas oxygen na combustion ji esi mmiri ọkụ rute karịa 25%, nchekwa nchekwa dị elu dịka 20%; esi mmiri ọkụ mmalite-elu kpo oku oge shortened site 1 / 2-2 / 3. Ihe ikuku oxygen bụ ntinye nke usoro anụ ahụ iji chịkọta ikuku ikuku, nke mere na ikuku oxygen na-ekpokọta gas bụ 25% -30%.
2. Banyere ngwa nke ikuku oxygen na ubi nke ime akwukwo
Site na mmelite mba a chọrọ maka nchekwa gburugburu ebe obibi maka usoro ịde akwụkwọ, ihe achọrọ maka pulp ọcha (gụnyere pulp osisi, pulp pulp, na achara pulp) na-abawanye. Ihe izizi nke ga - eme ka akpụcha mkpụrụ osisi na - eji nwayọọ nwayọọ gbanwee ka ọ bụrụ nke na - eme ka mmiri ghara ịmịpụta ọkụ; Usoro mmepụta pulp ọhụrụ chọrọ usoro ịmị ọcha na-enweghị chlorine, na ịcha ọcha pulp achọghị ikuku oxygen dị ọcha. Oxygen nke nrụpụta oxygen na-eme ka ikuku oxygen na-ezute na-ezute ihe ndị achọrọ, nke dị mma na gburugburu ebe obibi.
3. Banyere ngwa nke ikuku oxygen na ngalaba nke anaghị agbaze agbaze agbaze
Site ngbanwe nke usoro mmepụta ihe nke mba, agbaze agbaze na-enweghị ọla amalitela n'ike n'ike n'afọ ndị a. Ọtụtụ ndị nrụpụta amalitela iji ikuku oxygen adsorption na-ebugharị na usoro ikuku oxygen na-afụ opi, ọla kọpa, zinc, na antimony, yana ndị na-agbaze ihe na-eji ikuku oxygen maka ọla edo na nickel. Ojijiahịa nke PSA oxygen generator a gbasaa.
Ogo nke molekul sieve eji Igwe PSA oxygennọ n'ọkwá dị elu. Molekụla myọ bụ isi nke mgbali Ngabiga adsorption. Omume dị elu na ndụ ọrụ nke sieve molekụl nwere mmetụta na nkwụsi ike nke mkpụrụ na ịdị ọcha.